Tallaabo tallaabo farshaxan ah oo lagu sameeyo guriga - Ikkaro
Wax ku qabashada gacmaheenna waa wax lagu farxo. Wax uun ka abuur. Awood u lahaanshaha dib-u-warshadaynta qalabka aan aaminsanahay inaysan waxtar lahayn oo aan aragno inaan siinno nolol labaad.
Samee farshaxanno kana dhig kuwo qurux badan. Taasi waa wax cajiib ah.
Farshaxanada, DIY, sida loo sameeyo, is dhexgalka iyada oo aan si cad loo kala saarin. Ku dhowaad wax kasta oo ka mid ah baloogga waxaan dhihi karnaa waa farsamo, laakiin qaybtaan waxaan ku darnaa qodobbada aan wax ku qabanno
Sida loo sameeyo bocorka Halloween
Xalay waxaan ku degdegay my bocorka ugu horeysay ee Halloween. Ma ahan wax isku murugsan gabi ahaanba inkasta oo ay ahayd inaan sameeyo habeennimo mana haysto laydhadh lagama maarmaanka u ah inaan sawirro fiican ka qaado. Bocorka aad arki doontid had iyo jeer waa isku mid inkasta oo mararka qaar uu umuuqdo midab liin dhalaalaya mararka qaarna wuxuu leeyahay midab cagaar badan.
Sannadkan waxaan iibsaday bocor, sida ay ugu dhejiyeen calaamadda Kaladuwanaanta: Halloween, si fiican, nama siinayo macluumaad badan, inta badan wixii aan akhriyay (si aan u arko haddii qof xaqiijin karo) ay isticmaalaan (Cucurbita Pepo, Cucurbita isku qasan, Cucurbita ugu badan, Cucurbita moschata) maxay yihiin Bocorka Mareykanka, oo ay u adeegsadaan Jack o siraad, taasi waa, bocorka Halloween.
Sida loo sameeyo giraan qalin qalin midab leh leh
Tani waa mid ka mid ah kuwa caqliga yar taas waxaad mararka qaarkood ku aragtaa shabakada iyo inay maalin kaa dhigayaan.
Haa, waxaan baran doonaa sida loo sameeyo a faraanti macmal ah oo looxyada lagu sameeyo, iyo inay u egtahay, qabow sidan
Runtii waad jeceshahay. Hagaag, fiiri sida loo sameeyo, waa wax fudud. In kasta oo sawirrada casharradu ay adeegsanayaan lathe haddana waxaan ku samayn karnaa hab ka macmal ah oo guriga lagu sameeyo inkasta oo aan waqti badan gelin doonno qaar ka mid ah qalabka waxqabadka badan, xitaa qalabka gacanta lagu qaato.
Sida loo sameeyo dabool leh cinjir EVA ah si aad ugu dallacdo mobilkaaga
Marar badan goorma waxaan ka qaadnaa mobilada Ma garanayno meel aan uga tagno waxaanan ku dambaynaynaa inaanu ku nasanno dhulka, ama dusha sare ee hiitarka, miis fog oo uu ka hadhayo fiilada oo ay la socoto khatarta ah in qofkii na dhaafa uu nagu tuurayo
Waxaan sameyn doonaa wax aad u fudud kiiska si aad ugu haysato taleefanka casriga ah xeedho laftiisa oo iska ilooba dhibaatooyinkaas.
Waxaa sidoo kale lagu samayn karaa weel dhalo madhan, samaynta dambiilo yar, laakiin natiijada ayaa aad uga siixun.
Dib-u-warshadaynta qasacadaha tuna
Fantastic iyo fudud farsamada caruurta. Waxay ku saabsan tahay dib u isticmaal ama dib u isticmaal gasacadaha tuunbada si loo helo shumacyo haysta ama dheryaha ubaxa. Waxaan ku heli doonaa natiijooyin fiican dhowr ilbiriqsi gudahood.
Marka aan u dhaadhacno ganacsiga.
Waxaan u baahanahay xoogaa daasado la isticmaalay iyo xoogaa yar oo alwaax dhar ah. Kuwa alwaaxda leh waa wax aad u qurux badan, laakiin leh midabyo caag ah oo midab leh waxaan sidoo kale heli doonaa natiijooyin aad u wanaagsan ;-)
Sida loo sameeyo kaararka kirismaska ​​ee guryaha lagu sameeyo
Kirismaska ​​ayaa soo socda !!! Waxaa la joogaa waqtigii aan bilaabi lahayn diyaarinta mashaariicda aan dooneyno inaan adeegsano todobaadyo yar gudahood. Iyo… Akhri akhriska
Sida loo sameeyo dareen Mr. Baradho
Aynu isku dayno farsamo fudud oo noqon doonta waxyaabaha ay caruurtu ku ciyaaraan ee ay ku jecel yihiin. Waan ogahay … Akhri akhriska
Rinjiga koobabka ukunta
Laga soo bilaabo Qashinka na tus shaqada Enno reer Kroon
Xitaa wuxuu u bixiyay isbeddelkan magac Beedka ukunta
Illaa iyo hadda waxaan dib u isticmaalnay koobabka beedka artón, qolalka aan codka lahayn ama qalabka muusikada iyo inaan ku ciyaarno ciyaaro. Mancala
Sida loo sameeyo mootada laba laydh
@irreductible wuxuu igu ogeysiinayaa barta twitter-ka ku saabsan casharradan. Runtu waxay tahay inaan u maleynayo inay mudan tahay in dib loo soo celiyo oo ay sii jirto ... Akhri akhriska
Sida loo sameeyo calaamadaha magnetic
Ma jeceshahay koofiyadaha dhalada biirka?
Waa hagaag aan yeelno iyaga magnetic. Marka taasi? Wixii ku rid qaboojiyaha oo awood u leh inaad soo bandhigto, ee samee ciyaar magnetic tusaale ahaan jeegaga oo sida xaqiiqada ah waxaad ka fikiri kartaa qaar ka mid ah isticmaal dheeraad ah.
Sida loo sameeyo sabuurad
Dhamaantiin waad ogtihiin waxa a Guddi cad.
Boodhadhkan oo leh astaamo gaar ah waad qori kartaa oo masixi kartaa inta jeer ee aad rabto.